I-Ohlson Residence Green Room - I-Airbnb
I-Ohlson Residence Green Room
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguHåkan
UHåkan ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uHåkan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sinamagumbi amabini afanayo anendawo yokuphumla eqhelekileyo erenta ngokwahlukeneyo kwindlu yeendwendwe yasekhaya ngokunxulumene nabanini bamakhaya. Entsha yakhiwe icoceke kakhulu, intsha kwaye ine-airconditioning.
Izaphulelo zokuhlala ixesha elide
+ 7 iintsuku 20%
+ 28 iintsuku 50%
Ukuba ayifumaneki ngomhla owufunayo, jonga kwakhona uluhlu lwethu lwegumbi lePinki eOhlson.
Le ndawo ikwindawo yokuhlala eqhelekileyo kwiiphilippines kunye nezinto ezintle kunye nezibi. Ngokwesiqhelo uthe cwaka kwaye uyaphumla kodwa ngoku kwaye emva koko kufuneka wabelane ngokugqabhuka kwekaraoke yabamelwane!
Le yindlela abaphila ngayo abantu abakumgangatho ophakathi basePhilippines. Ukuba undwendwela ngaphandle kweePhilippines uya kufumana umbono olungileyo kakhulu ukuba ubomi bunjani kwaye usene-backup encinci yasentshona yokulawula kunye nokujikeleza apha, kummkeli wakho waseSweden!
Umbuki zindwendwe ngu- Håkan
Njengoko indlu yeendwendwe ikwindawo enye nendlu yethu enkulu uya kuhlala ekhona umntu ukuba ufuna ukubuza imibuzo. Uthatha isigqibo ngokwakho ukuba ufuna inkampani ethile okanye ukuba ufuna ukushiywa wedwa.
Iilwimi: English, Svenska, Tagalog
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dipolog City